Inkqubo yokuThuthwa kweFektri yonke
Inkqubo yokuhambisa iikhadibhodi
Inkqubo yeModyuli yeBelt yokuhambisa ngokuzenzekelayo
Inkqubo yeRooter yokuhambisa iRoller
Inkqubo yoThutho lwePhepha
Umatshini oMelekileyo wokuLaminetha oMbane
Indawo enye yokuLaminetha i-Smart Line
Inkqubo yokuhambisa kunye nokulungisa
Isantya esiphakamileyo seLline Laminator
Isantya esiphezulu seRotary Stacker
Ibhokisi lebhokisi yokwenza umatshini
Gluer yesiqulathi seefayili esizenzekelayo
Uvavanyo loMgangatho oZenzekelayo kunye noMatshini wokuPrinta weKhowudi yeQR
Isantya esiphakamileyo seLaminator
Emgceni weLaminator kunye neStacker
Inkqubo yoLawulo lweMveliso
Inkqubo yokuLawulwa komgca wokugqibela
Inkqubo yokuLawulwa kweMigca epheleleyo
Ukuhanjiswa okungaphaya kwamazwe aphesheya ngo-2021
ngomphathi ku 21-06-22
I-GOJON ihambisa inkqubo yokuhambisa iikhadibhodi ezenzekelayo kunye ne-PMS ukuya eThailand Ekuqaleni kowe-2021, umgca wokuhambisa amakhadibhodi ozenzekelayo weGoJON kunye neNkqubo yoLawulo lweMveliso igqibile ukuvelisa kunye nokuvavanya kakuhle. Le seti epheleleyo yokuhambisa umgca iya kuba sithi ...
Ukujonga phambili kumzi-mveliso wephepha owenziwe ngerayisi kwihlabathi ngo-2021
Njengoko sonke sisazi, ngo-2020, uqoqosho lwehlabathi ngequbuliso luhlangabezana nemiceli mngeni engalindelekanga. Le mingeni ichaphazele ingqesho kunye neemfuno zeemveliso, kwaye yazisa imiceli mngeni kumxokelelwane wonikezelo lwamashishini amaninzi. Ukulawula ukusasazeka kwesifo, iinkampani ezininzi zine ...
Ukusinda kuKhuseleko lomzi mveliso weCarton: Izicwangciso eziphambili zokujongana ne-COVID-19
Ukujongana ne-COVID19, ixabiso lephepha eliluhlaza lenza abaphathi abaninzi bazive benyuka. Nangona ixabiso langoku lephepha liwile kancinane, abaphathi abathengileyo okanye babambisa izinto ezingasetyenziswanga ngamaxabiso aphezulu abakwazanga ukuphinda babuye ...
ngomphathi ku 21-01-16
I-GOJON izakuya e-IndiaCorr Expo 2021 okoko saya e-IndiaCorr Expo 2019, kwaye safumana iziphumo ezilungileyo kakhulu, ke sigcina umnquba we-IndiaCorr Expo 2021 kwaye sizokuya ngexesha. Ngenxa ye-COVID 19 kunye nefuthe malunga neminyaka emi-2, Sinethemba lokudibana ne-India ...
Inombolo ye-66 Zhuyuan Road, iZiko loPhuhliso lwezoShishino oluPhezulu lweSizwe, isiXeko saseQingdao, kwiPhondo laseShandong, China. 266112
Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Ibhanki ye-Erp, Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Inqwelo yokuhambisa, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Ifolda yephepha le-A3,